Arsenal: Hadaladii Ugu Horreeyay Ee Saxiixooda Cusub Iyo Xiddigaha Uu Xiiseeyo Ee Kooxda – Garsoore Sports
Arsenal: Hadaladii Ugu…
Arsenal: Hadaladii Ugu Horreeyay Ee Saxiixooda Cusub Iyo Xiddigaha Uu Xiiseeyo Ee Kooxda
Kooxda Arsenal ayaa ku dhawaaqday saxiixa dambeedkii-biddix ee kooxda Benfica Nuno Tavares kaas oo ay ku xoojin doonto garabkeeda biddix ee daafaca kaddib markii ay sidoo kale heshiis waqti dheer ah ka saxiixdeen cayaaryahan Kieran Tierney.
Gunner ayaa maanta shaaca ka qaadday saxiixa xiddigan burtuqiiska ah oo ay kula soo saxiixdeen 7 milyan oo ginni waxaana uu xiddigan naadiga u xidhan doonaa nambarka 20aad waliba todobaadkan ayuu la bilaabi doonaa tababarka isku diyaarinta xilli ciyaareedka 2021-22.
Xiddigan ayaa markii uu kooxda kusoo biiray waxaa uu la hadlay saxaafadda waxaana hadaladiisii ugu horreeyay kamid ahaa: “Aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay waa koox weyn aniga ahaanna, nin dhalinyaro ah farxad ayey ii tahay inaan halkaan joogo, ”ayuu u sheegay Arsenal.com. “Waxay ku fiican tahay xirfadeyda, inaan ka bilaabo Arsenal waa koox weyn, aadna waan u faraxsanahay.”
Mar wax laga weeydiiyay in saxiixiisa uu wakhti dheer qaatay ayuu yiri : ” “Markii aan dhammeeystay xilli ciyaareedka wakiilkeyga wuxuu ii sheegay inay Arsenal i xiiseyneyso aniga,”.
“Markii ugu horeysay aad ayaan ugu farxa wixii intaa ka dambeeyay waxaan kula riyooday hooyaday inaan inta imaanayo. Hadda waan imid aad ayaana u faraxsanahay.”
Nuno Tavares ayaa mar wax laga weeydiiyay xiddigaha uu xiiseeyo ee kooxda haatan iyo kuwii hore ayaa yiri :
“Waqti xaadirkan waxaan jeclahay Smith (Emile Smith Rowe) maxaa yeelay isagu waa jiilkeyga,” ayuu yiri. “Wuxuu nala ciyaaray inaga waxaana ka wada cayaarnay hal dhinac, maxaa yeelay wuxuu ka ciyaaray middigta anigana waxaan kooxda dhalinyarada uga ciyaaray biddixda “
“Waa ciyaariyahan wanaagsan waxaanan arkayaa (Bukayo) Saka sidoo kale. Ciyaartoy da ‘yar, ciyaartoy fiican.”
“Cayaartooydii hore waxaan jeclahay(Thierry) Henry waa xiddig aad u fiican wayna ii fiicantahay aniga inaan xasuusto sheekadaas. ”
Ugu dambeyntiina da ’yarkan ayaa shaaca ka qaadday waxa ay jamaahiirta Gunners ka filan karaan marka ay ku arkaan Emirates xilli ciyaareedkan.
“Waxaan ahay mid deg deg ah waxaanan leeyahay tayo farsamo, ayuu yiri lambarka cusub ee Arsenal 20-aad.”
Heshiisyadii La Dhammeeystiray Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Maanta